တရုတ် ရော်ဘာ လက် ဘို့ Benz W251 နောက်ဘက် စက်ရုံ နှင့် ထုတ်လုပ်သူများ - ကွမ်ကျိုး Junshang ကုန်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လေ Strut ပြုပြင်ပါ ပစ္စည်းများ > ရော်ဘာ လက် ဘို့ လေ Strut > ရော်ဘာ လက် ဘို့ Benz W251 နောက်ဘက်
The အောက်ပါ ဟုတ်တယ် အကြောင်း ရော်ဘာ လက် ဘို့ Benz W251 နောက်ဘက် ဆက်စပ်, ငါ မျှော်လင့်ပါတယ် ရန် ကူညီပါ မင်း ပိုကောင်း နားလည်သည် ရော်ဘာ လက် ဘို့ Benz W251 နောက်ဘက်.
Mercedes-Benz R Class W2512006-2013 အတွက်ရော်ဘာဆီးအိမ် Benz W251 ၏နောက်ဘက် 2513200425 လေယာဉ်ရပ်နားမှုအတွက် Junshang ရော်ဘာလက်
Jenzhang ရော်ဘာလက်ရှည် Benz W251 နောက်ဘက် 2513200425 ကိုအရည်အသွေးမြင့်ရော်ဘာပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအဆင့်မြင့်အီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရော်ဘာဆီးအိမ်သည် ၂၅ ကီလိုဂရမ်အထိဖိအားကိုခံနိုင်သည်။
Benz W251 နောက်ဘက်အတွက်ရော်ဘာလက်
Mercedes-Benz R ကိုအတန်းအစား W251 သည်
Mercedes-Benz R Class W2512006-2013 အတွက်ရော်ဘာဆီးအိမ် Benz W251 ၏နောက်ဘက် 2513200425 လေယာဉ်ရပ်နားမှုအတွက် Junshang ရော်ဘာလက် is made of high-quality rubber, high-quality nylon and by most advanced electronic digital- controlled machine, Nylon line distribution evenly，the cutting incision smoothly. The rubber bladder can withstand max pressure up to ၂၅ ကီလိုဂရမ်.
hot Tags:: ရော်ဘာ လက် ဘို့ Benz W251 နောက်, တရုတ် စက်ရုံ, ထုတ်လုပ်သူများ ပေးသွင်းသူများ, လုပ်သည် in တရုတ်